Xubintii Ciyaaraha: Messi iyo 100 Gool! (dhegayso) – Radio Daljir
Xubintii Ciyaaraha: Messi iyo 100 Gool! (dhegayso)
Oktoobar 19, 2017 1:02 b 0
Waxaa la ciyaaray kulamo ka tirsan koobka horyaalada qaaradda Yurub ee Champions League. Ciyaaryahanka kooxda Barcelona Leo Messi ayaa goolasha uu dhaliyey koobka qaaradda Yurub waxa ay gaareen 100 gool.
Waxaa kale oo soo socda mar dhowna lana ciyaari doona kulamo ka tirsan koobka labaad ee qaarada Yurub loogu daawashada badan yahay ee Europa League.